Ereyga nonwoven macnaheedu ma aha "tolmo" ama "tolmo", laakiin dharka ayaa aad uga badan. Aan tolmo lahayn waa qaab-dhismeed dhar ah oo si toos ah looga soo saaro fiilooyinka iyada oo la isku xidhayo ama la isku xidhayo ama labadaba. Ma lahan qaab dhismeed joomatari abaabulan, halkii ay ka dhalan lahayd xiriirka ka dhexeeya ...
Warshaddeenu waxay leedahay aag 6000m2 asal ah oo shaqeynaya, sanadka 2020, waxaan balaarinay dukaanka shaqada iyadoo lagu daray 5400m2 Baahida weyn ee soo saarkeena, waxaan rajeyneynaa inaan dhisno warshad weyn
Warshadeenu waxay soo iibsatay 3 khad oo cusub oo qalabka wax soo saarka ah si loo qanciyo awoodeena amar ee hadda ah qashin qubka qalalan. Iyada oo macaamiisha iyo macaamiisha badan ee shuruudaha iibsashada ee masaxaadda qalalan, warshaddeena ay diyaarisay mashiinno badan ka hor si aysan dib u dhac ugu imaanin waqtiga hoggaanka, oo ay dhammeeyaan macaamiil dhowr ah ...
Waxaan haynaa tababar kooxda iibka ah si aan kor ugu qaadno nafteena. Kaliya maahan xiriirka macaamiisha, laakiin sidoo kale adeegga macaamiisheena. Waxaan higsaneynaa inaan siino adeegga ugu fiican macaamiisheenna, ka caawinno macaamiisheenna inay xalliyaan dhibaatooyinka inta lagu jiro isgaarsiinta baaritaanka. Macaamiil kasta ama caado macquul ah ...
Farqiga u dhexeeya Acupuncture Maqaarka-aan-tolmo-xidhka iyo Maqaarka-aan-tolmo lahayn
Acupuncture dhar aan tolmo lahayn ayaa aan loo tolanayn caag, polypropylene alaabta ceyriinka waxsoosaarka, ka dib markii dhowr acupuncture laga shaqeynayo meesha ku habboon ee la duubay. Marka loo eego nidaamka, oo leh qalab kala duwan, oo laga sameeyay boqollaal badeecooyin. Acupuncture dhar aan tolmo wanaagsan leh i ...
Shukumaan la tuujiyey ma la tuuri karaa? Sidee loo isticmaali karaa tuwaal la tuujin karo oo la qaadan karo?
Shukumaanada la tuuray ayaa ah alaab cusub oo caan noqotay sanadihii la soo dhaafay, taas oo u suurta gelineysa tuwaalada inay yeeshaan howlo cusub sida qaddarinta, hadiyadaha, aruurinta, hadiyadaha, iyo ka hortagga caafimaadka iyo cudurada. Waqtigan xaadirka ah, waa shukumaan caan ah. Shukumaan la duubay waa shey cusub. Isku soo ururi ...